Home Wararka RW Rooble oo qoraal uu soo saaray awooda kaga qaaday wasiirada xukumadiisa?...
RW Rooble oo qoraal uu soo saaray awooda kaga qaaday wasiirada xukumadiisa? Yaa dalka ka taliya?
Waxaa durbadiiba soo ifbaxaysa in heshiiskii dhawaan ay saxiixeen ka qaybgalayaasha shirka wadatashiga qaran uu ahaa mid ka balaaran doorasho balse awodii dalka qacabta loo galiyay dowlad goboleedyada iyo Rooble oo kale ah.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar kusoo rogay dhammaan wasiirada xukuumaddiisa inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka ah ee uu dalka ku jiro.
su’aasha isweydiinta u baahan ayaa ah waxa maxay ujeedada hole wasiir mar hadii ayan lahayn awood ay howl-maalmeedka ku filayaa? Yaa dalkaan xukuma?
Halkan hoose ka akhriso waraaqda